Helical Line Fittings Manufacturers sy Suppliers | China Helical-dalana, Fittings Factory
Jera ny vahaolana ho an'ny ADSS sy ny OPGW telegrama dia mandroso mba hanatsarana ny azo itokisana, fampisehoana, vidiny famonjena ny hery rehetra fizarana Network.
Jera manome preformed Fittings ho an'ny lehilahy sy ny Voaro niteraka ambony cabling ny aluminium sy varahina rafitra ho fitsinjarana ny fahefana HV sy ny lalamby sehatry ny tambajotra. Helical Fittings koa ampiasaina amin'ny fifandraisan-davitra ambony tambajotra ho mafy ADSS sy OPGW fibre optic telegrama.
Jera ny vokatra isan-karazany ny vokatra preformed andalana ahitana: lehilahy maty-end misaintsaina, fampiatoana misaintsaina, lafiny fifandraisana, kambana fifandraisana, insulator ambony fifandraisana, fiadiana hazo, feno fihenjanana splices, fa aluminium, varahina, na nandrisika mpitarika ny ara.
Ny misaintsaina natao ho hery ambony anchoring fampitana andalana, jiro eny an-dalana, tany fitaterana, ny trano sy ny singa fanorenana izay manome ankehitriny ny fomba mahomby indrindra ho an'ny lehilahy fiarovana ny kofehy. Zavatra tsy manam-paharoa, ny iray-maty tapa-end dia milamina ny amin'ny miseho ihany, ary na ny afaka amin'ny horonan-adin-tsaina avo mitazona fitaovana. Ny maty-tariby farany misaintsaina lehilahy no voalohany manome fitoerana hanatitra ny nampandre haingana, ny endri-javatra izay manome mateza kokoa, mora kokoa tensioning sy mahay mampifanara-javatra ny maro guying. GUY-mafy Maty-dia vita amin'ny faran'ny mitovy zavatra toy ny kofehy izay efa ampiharina. Tokony hampiasaina ny fitaovana izay natao tany an-toerana raikitra. Ny andalana ambony mety tsara tsy tokony havela hanodinana na mihodina momba ny mpiray ny kofehy. Tsy tokony ho ampiasaina toy ny fitaovana ao anatin'izany ny avy-alongs, manongotra-in misaintsaina, sns
Rehetra ireo Niharam-pitsapana ny fiaraha-miasa amin'ny orinasam-pifandraisana sy ny herinaratra, mba hanome fahafaham-po ny fepetra takiana eo an-toerana sy ny fenitra-pirenena ny mpanjifa.
Isan'andro isika - Jera dia fanatsarana ny Accessories mba hahazoana vaovao manerantany olana ny herinaratra sy ny tambajotra mpizara, tsena.